Siyaasi ka tirsan xisbiga xag jirka ah ee SD oo dacwad lugu soo oogay aflagaado oo uu soomalida u geeystay | Somaliska
Nin lugu sheegay inuu yahay siyaasi ka tirsan xisbiga xag jirka ah ee SD, luguna magacaabo Jan Sohl, ayaa haatan lugu soo oogay dacwad la xirriirta aflagaado ay ku dheehneyd naceyb iyo isir faquuq oo uu si gaar ah soomaalida u gaar ahaan dhalinyarada ciyaarta xeegdda barafka .
Ninkan oo bartiisa ku sheega facebook-ga ku aflagadeeyeeynaye kooxdaas ayaa ku tilmaamay ulaha ay ku cayaarayaan ula mid tahay qori xabadaha laga rido oo aan waxba ka aqoon ciyaarta barafka ee ay ku fiican yihiin oo keliya dagaalka iyo kufsiga. Dacwad oogaha lugu magacaabo Daniel Edsbagge oo dacwada ka dhanka ah ninkaasi hormuud ka ah, ayaa sheegay in ereyeda ninkaasi bartiisa facebook-ga ku qoray ay noqon karaan kuwo dad si gaar ah ugu jiheeysan gaar ahaan soomaalida oo midabkooda aflagaadeeyey.
Dacwad ooge hore oo isna la yiraahdo Sven-Erik Alhem, ayaa isaganan dhinaciisa sheegay in ay habooneyd in dacwad ooguhu uu baaritaan ku sameeyo. Ninkan xag jirka ah ayaa ah nin caan ku ah aflagadeynta dadka muslimiinta. Tan iyo markii ay soo shaac baxday aflaadeeynta soomaalida waxaa uu iska casilay xilkii uu xisbigaasi u hayey iyo guud ahaan siyaasadahiisa xag jirka ku saleeysan. Haddii dacwadan lugu soo oogay lugu helo in soomaalida uu aflagaadeeyey waxaa uu mudan doona ciqaab xabsiyadeed iyo ganaax.
Ninkaan sidaan u aflagaadeynaayo dad aan waxba ka haleynin waa cudur qalbiga ugu jiro cudurkaasne daawo maleh ee waa qaanuunka lamarsiiyo
Yaa marsiinayo hee. Kuli waa qawda maqashii waxna hauqaaban. Waa SaaS sheekadan.
June 3, 2017 at 17:00
Allaha naga qabto Gaaladan illen Anaga ugu yimid Dalkooda